Maaskaro, Haddiyada Bukaanka, Sariirta Isbitaalka - Caafimaadka JBH
Na soo wac: 0086-18913356391
Ku saabsan JBH
Ku soo dhowow Anhui JBH Medical
Akhri tan si aad wax uga ogaato annaga!
Anhui JBH Medical Apparatus Co., LTD waxaa la asaasay 2013. iyadoo 7 shirkadood oo hoosaad ah leh isla markaana leh xarun wax soo saar casri ah oo heerkeedu yahay 78000 acres. Shirkad soo saarta wax soo saarta oo ay weheliso is dhexgalka R&D iyo kooxda suuq geynta caalamiga ah, oo leh alaab soo saareed u gaar ah iyo sidoo kale alaabada ODM ee u adeegta suuqa adduunka, ayaa hadda leh in kabadan 500 oo shaqaale ah oo ka diiwaan gashan caasimada in kabadan 12 milyan oo doolar. Alaabada waaweyn waa sariir isbitaal la qaadan karo oo caqli gal ah, kor u qaadista bukaanka, maaskaro difaac ah, iyo dhamaan aaladaha kale ee la xiriira caafimaadka. Waxaa ansixiyay nidaamka tayada caalamiga ah, ISO 9001, ISO14001, ISO 13485 waxayna dhiseen sheybaar la aqoonsan yahay SGS, halka alaabooyinku ay leeyihiin shahaadada FDA, CE, iyo CFDA, oo suuq geyn ka badan 70 dal. Waxaan u socon jirnay oo aan u horumarinaynay dhanka guusha si daacadnimo, farxad, iyo raalli-gelin ah.
Maxaa loo Doortaa Caafimaadka Anhui JBH?
Alaabtu waxay la kulmaan ISO, CE, iyo Heerarka FDA. Alaabada la sharciyeeyey. SGS warshad idman.
Si buuxda u tababaran kooxda daryeelka macaamiisha, diyaarna u ah inay ka jawaabaan dhammaan su'aalahaaga.
Waxaan ku haynaa hoos udhaca qiimaha adag ee hanaanka xakamaynta tayada.
Waxaan qaadaneynaa caqabad kasta, ashtako la'aan. Marnaba kuma nasan doonno guulahayaga.
Sariirta Daryeelka Guryaha Korantada ee Naafada 1.V….
Sariirta Isbitaalka Korontada
Sariirta jiifka Isbitaalka ee Naafada Dadka Naafada ah Si fudud t ...
3 lakab, FDA, CE Waa la ogolaaday Maaskaro la adeegsan karo ...
Maaskaro Qalliinka La Tuuri Karo
FDA, CE Model ansaxiyay Nooca: JBHF001 Disposa ...
Wiishka bukaanka korontada ku shaqeeya oo leh saldhig la hagaajin karo
Isugeynta Guud 1110 * 640 * 1480mm Duty Cycl ...
Wareejinta Bukaanka la qaadan karo ee la qaadan karo Lift wiish f ...
Isugeynta Guud 1510 * 735 * 1460 mm Duty Cyc ...
Maaskarada Wejiga loo Tuuri Karo
Maaskaro shayga mashiinka Mashiinka shaashadu ...
Bedelka qalabka kontoroolka fog ee sariirta, sariirta bukaanka cisbitaalka, sariirta foosha, sariirta isbitaalka, maaskaro afka wajiga, Maskaxda wajiga lagu tuuri karo qadka,
Noocyada sariiraha cisbitaalka
Sariirta isbitaalka guud ahaan waxaa loola jeedaa sariirta kalkaalinta, taas oo loogu talagalay iyada oo loo eegayo baahiyaha daaweynta bukaanka iyo dabeecadaha nolosha sariirta ee sariirta saaran, waxaana loogu talagalay xubnaha qoyska in ay la socdaan ...
Hawlaha iyo noocyada qaadista bukaanka
Shaqada wiishka loogu talagalay bukaanka curyaanka ah: U guuritaanka dadka dhaqdhaqaaqa aan ku habboonayn hal meel oo loo wareejiyo mid kale ayaa bukaan socodka ka soo qaadi kara dhulka ilaa sariirta; cagaha qafisyada waa la furi karaa ...
Kala soocidda iyo heerarka waji-xidhka
Maaskaro Caafimaad oo La Tuuri karo: Maaskarada caafimaad ee la tuuri karo: Waxay ku habboon tahay ilaalinta fayadhowrka ee bey'ad caafimaad oo guud oo aan halista ugu jirin dheecaanka jirka iyo xereynta, ku habboon gen ...
sariirta foosha, Bedelka qalabka kontoroolka fog ee sariirta, Maskaxda wajiga lagu tuuri karo qadka, maaskaro afka wajiga, sariirta isbitaalka, sariirta bukaanka cisbitaalka,